» एमसीसी सम्झौता चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको भनाई
एमसीसी सम्झौता चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको भनाई
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:२३
काठमाडौं । देशभर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विरोध भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन चाँडो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । जसपाले एक्लै निर्णय गर्न ससक्दैन यसमा सबैको साथ चाहिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लाग्न जरुरी छ ।’
अहिले एमसीसीको विषय जनस्तर बाँडिएको र चाँडै एमसीसीको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।